Daawo: Australia oo amar ku bixisey in la laayo 1/3 geela duurjoota ah, iyo Somalia oo Geelu ka yahay Lafdharbarka Nolosha – idalenews.com
Geel duurjoog ah oo lagu qiyaaso milyan ayaa ku nool dalka Australia. Dowlada Australia ayaa soo saartay sharci cusub oo dhigaya in sadax meelood meel la laayo Geela kunool Australia iyadoo sharcigan loo cuskaday in Geelu uu khatar kuyahay dhul beereedka iyo Beey’ada.
Sharcigan ayaa durna dhaqan galay waxaana bilaabatay in helikobtaro loo diro duurka hawadana laga toogtu Geela.Nin ganacsada ah oo u dhashay dalka Qadar laguna magacaabo Ali Sultan Al Hajri ayaa arintan aad uga xumaaday wuxuuna is barbardhigay qiimaha Geelu uu ka leeyahay dunida muslimka gaar ahaan dalalka Carbeed iyo sida loogu ciyaariyo wuxuuna go’aansaday in arintaas uu wax ka qabto.
Barnaamij aad u xiisa badan oo arintan ku saabsan halkan hoose ka daawo:
Dhanka kale dadka Soomaaliyeed ee xoolo dhaqatada ah meel kastaa ay ku nool yihiin, waxaa ay aad u dhaqdaan xoolaha nool gaar ahaa geela oo ah lafdhabarka nolosha dadka Somaliyeed. Caanaha Geela ayaa ah caanah ay dadka Soomaaliyeed aadka u jecel yihiin, iyagoo weliba cabista caanaha geela dadka ay daawo ahaa miyiga u tagaan.
Daawo reer Mandheera sida caanaha geelaha ay uga tanaadeen:
Idale News www.idalenews.com
Wasiir Dibadeedka Somalia Fowsiya oo Talyaaniga u joogta Khilaafka Safaarada Somalia Ee Italy iyo Diyaarinta Booqosho Madaxweyne Xasan ku tagaayo Talyaaniga